Dowladda oo isku diyaarisay dagaal ka dhan ah Argagixisada Al-shabaab (Sawiro) – Radio Daljir
Dowladda oo isku diyaarisay dagaal ka dhan ah Argagixisada Al-shabaab (Sawiro)
Maarso 30, 2019 4:02 g 0
Xukuumada Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Argagixisada Al-shabaab ee dhibaatda ku haya umada Soomaaliyeed.
Ra’iisul-Wasaaraha Xukuumadda fedraalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa goor dhawayd waxa uu booqday xerada ciidamada dowladda ee Gen: Gorod oo ah halka ay ciidamadn ka amba baxayaan.
Ciidamadan ayaa ha kuwo loo diyaariyay duulaan ka dhan ah arxan laawayaasha Al-shabaab ee gacanta ku haya gobolada koonfureed ee Soomaaliya.
Waxa uu jula dar daarmay in ay udiyaar garoobaan in difaaca dalkooda ay udhintaan.
Xildhibaano dhaar ku maray inay ridayaan Xukumadda RW khayre (Daawo)
Madaxweyne Deni :“lama aqbalikaro in kuraastii dowladda ay dad buuxiyaan oo aan doonaynin in danaha daka laga shaqeeyo” (dhegayso)